काठमाडौं । अहिलेसम्म औषधि तथा खोप पत्ता लाग्न नसकेको कोरोनाका बिरामीलाई नेपालमा के औषधि दिइएको छ भन्दै चाँसो व्यक्त गरिएको छ । नेपालमा कोरोना संक्रमितलाई चिकित्सकले स्वास्थ्य अवस्था हेरेर प्यारासिटामोल देखि भिटामिन र निमोनियाका–श्वासप्रश्वासका बिरामीलाई त्यसैअनुसार औषधि दिने गरेका छन् ।
कोरोनाका बिरामीलाई कस्तो औषधि दिने भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्ल्यूएचओले निर्देशिका नै बनाएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पनि गएको अप्रिलमा कोरोना संक्रमण भएका व्यक्तिलाई स्वास्थ्यसंस्थामा दिइने सेवाबारे एउटा अन्तरिम निर्देशिका जारी गरेको थियो ।
साठी वर्षभन्दा माथिका, दमका बिरामी, मधुमेह वा मुटुरोग भएका व्यक्तिहरूलाई संक्रमण भए उच्च जोखिममा पर्ने हुनाले विशेष निगरानी गर्ने गरिएको छ । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका प्रवक्ता डा. अनुप बास्तोलाले अक्सिजन नै चाहिने अवस्थाका मानिसलाई डेक्सामेथासेन भन्ने स्टेरोइड प्रयोग गर्ने गरिएको बताएका छन् । र, अवस्था हेरेर मिथाइलप्रेड्निसोलोनको पनि प्रयोग गर्ने गरिएको छ ।
उनका अनुसार शरीरमा रगत जम्ने समस्या देखियो भने हेपारिन नामक औषधि पनि दिने गरिएको छ । लक्षण देखिएका र बिरामी परेकामध्ये आठदेखि १० प्रतिशतलाई अन्य संक्रमण देखिएको अवस्थामा एन्टीबायोटिक दिने गरेको डा. बास्तोलाको भनाई छ । मुख्यगरी अक्सिजन दिने गरिएको छ भने सामान्य ज्वरो भए सिटामोल र खोकी लागेको भए कफ सिरप दिने गरिएको डा. बास्तोलाले बताए । विरामीले पाइरहेका औषधि सहजै पाउन सकिने औषधि भएको पनि उनले जानकारी दिए ।
<<< : प्रहरी प्रवक्ताको जिम्मेवारी कडायतलाई
निर्मला काण्ड : दिल्लीराज विष्टसहित आठै जना प्रहरीले पाए सफाइ : >>>